Kudzidza kunopa bonde zvakanyanya zvinogona kureva mukana wepamusoro wekenza - teles
Kudzidza Kunoona Breast Cancer Ranger Inogona Kukwira ne50% yevakadzi Vanonwa…
Vechidiki Cancer Vanopona Vane Njodzi Yakakwira Yezvinetso Zveutano Zvakawandisa…
Zvepabonde hazvikonzere cancer, asi mararamiro ako ebonde-centric anogona.
Uye ichokwadi kunyanya kuvakadzi. Maererano nekudzidza kutsva, avo vaive nevarume gumi kana vanopfuura vepabonde panguva yekurarama kwavo, vaipfuura 10 muzana mukana wekuwanikwa vaine chirwere chekenza pane vakadzi vane mumwe kana zero zero.
Varume havana kuponeswa zvachose, kana. Njodzi yavo yekenza yakasimuka kusvika pazvikamu makumi matanhatu neshanu mushure memazana gumi kana anopfuura, kana tichienzanisa nevaya vane imwe kana imwe chete.
"Tsvagurudzo dzakapfuura dzakaratidza kuti chirwere chechirwere cheshuga (chirwere chinotapuriranwa pabonde) chinogona kukonzera makanzuru akati wandei," akadaro munyori-mutsvagiridzo, Lee Lee, uyo akatsvaga rakabudiswa muBMJ Zvepabonde & Nehutano hwekubereka musi wechina.
"Zvinonakidza kuti njodzi iripamusoro muvakadzi kana tichienzaniswa nevarume," Smith akaudza Reuters mune email. "Izvi zvinogona kunge zvichiitika nekuti kubatana pakati pezvimwe njovhera nekenza kwakasimba muvakadzi."
Munguva yekudzidza, zvidzidzo zvakabvunzwa kuti vataure huwandu hweavo vanoita zvepabonde ivo vavakange vachiri navo pakurarama kwavo.
Varume vanenge vangangoita katatu zvakapetwa kuti vangave vaine gumi kana anodarika vairara navo, pamwero we10 muzana, nepo zvikamu zvisere muzana zvevakadzi vakawira muboka rimwe chete.
Kuwanda kwevakadzi vakasiyana pakati pevakadzi, nekupesana, kwakawa zvakanyanya zvichienzaniswa nevarume. Pakati pevakadzi, gumi nevatanhatu muzana vaive vaine vashanu kusvika vapfumbamwe vevakabatana.
Vakadzi vane gumi kana vanopfuura vavowo vaivawo makumi matanhatu neshanu muzana mukana wekuti vataure chirwere chakamira kwenguva refu vachienzaniswa nevamwe vavo vakachena.
Kazhinji, masayendisiti akaona kuti avo vari pamusoro pemugumo wechidiki zera rekuongorora vaiwanzo kutaurira vamwe vakomana vepabonde. Nekudaro, mararamiro avo airatidzawo kusanganisira kunwa nekuputa kwakawanda, uyezve nekushanda kwakasimba. Mari inowonekerawo sechinhu: Vaya vakawira pamusoro kana rakaderera magumo ehupfumi ekuonekwa vaive nevazhinji vekuita zvepabonde kupfuura avo vane mari yavo yakapinda pakati.
Vatsvaguri vakadhonza data kubva kuChirungu Longitudinal Study yeZera, inoongorora vanhu vakuru vane makore makumi mashanu zvichikwira. Ongororo iyi yakaongorora mhinduro kubva kuvarume zviuru zviviri, makumi maviri nevaviri, uye vakadzi mazana maviri nemakumi mana nemashanu, makumi mana nemasere.
Kuwedzerwa kwegomarara kunogona kuve nechekuita nesarudzo dzemararamiro, uye kwete kuunzwa nebonde pachako, Dr. Robert Edward, purofesa wezvekudzivirira, gynecology uye sainzi yekubereka muYunivhesiti yePittsburgh Chikoro cheMishonga, akaudza Reuters.
Akayambirawo kuti "kuputa fodya nekudhakwa kunowedzera mukana wegomarara nezvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde."
"Vanhu vakasangana nenjodzi dzekusangana pabonde vanofanirwa kubata avo vanochengetedza hutano kuti vaongororwe hutachiona hwevatano uye vanofanirwa kukurukura pachena nzira dzekupedza njodzi iyi nevanovapa hutano," Smith akaraira. "Kushandisa kuchengetedzwa kwakakodzera kuchaderedza njodzi yevanobatana nekenza kuenda mberi."
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://nypost.com/2020/02/14/study-warns-more-sex-might-mean-higher-likelihood-for-cancer/
Webhusaiti yePM yakashandiswazve yekurodha porn muzviitiko zvekusagadziriswa kwesizinda - xnxx
Kudzidza Kunoona Zamu reCancer Risk Rinogona Kukwira ne50% yevakadzi Vanonwa Mukombe weMukaka…
'Mhuno yemagetsi' inogona kunhuwa kufema kunyevera nezvenjodzi yepamusoro ye…